Wasiir Fargeeti iyo Xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye oo isku dhegan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiir Fargeeti iyo Xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye oo isku dhegan
Waxaa magaalada Baydhabo saaka ka socota maalintii 3aad doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee maamulka Koonfur, Galbeed, taasoo ay ka qeyb galayaan ergooyinka beelaha oo u kala codeynaya musharaxiin u tartamaya xilkaas.
Doorashooyinkii saaka dhacay ayaa waxaa ku soo baxay labo xildhibaan oo ka mid noqonaya xubnaha aqalka hoose kuwaasoo kala ah Aadan Ibraahim Dhaayow & Xasan Cali Max’ed ka dib ay ka guuleysteen raggii la tartamayey kuraasta beelahooda.
Doorashada ugu adag ee saaka ka dhacaysa magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku loolamaya wasiirka Maaliyada Somalia Maxamed Aadan Fargeeti oo doonaya inuu ku biro aqalka hoose iyo Maxamuud Macalin Yaxye oo ka tirsanaa baarlamanka uu xiligiisu dhamaaday, mar kalena doonaya inuu soo laabto.
Labada musharax oo ka soo wada jeeda beesha Disow ayaa maalamahan ka wada magaalada Baydhabo kulamo ay ku xod-xodanayaan ergooyinka wax dooranaya, waxaana la sheegay in musharaxintan ay dhaqaale badan oo u dhexeeyo shan illaa toban kun oo dollar ku kala iibsanayaan codadka ergooyinka.
Illaa 69 xildhibaan ayaa la filayaa in laga soo doorto degaanada maamulka Koonfur galbeed Somalia kuwaasoo ka mid noqonaya aqalka hoose, iyadoo labadii maalmood ee u dambeeyay magaalada Baydhabo lagu doortay illaa 17 Xildhibaan.